काठमाडौं, २३ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमविरुद्धको अदालती प्रक्रियामा नयाँ मोड देखिएको छ । बम विस्फोटपछि इँटा भट्टामा हालेर जिउँदै मारिएका भनिएका ओसी अख्तर विदेशमा रहेको भन्दै अख्तरका पत्नी अमना खातुनले जिल्ला अदालत रौतहटमा निवेदन दिएपछि नयाँ अवस्था सिर्जना भएको हो ।
रौतहटका काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलमबिरुद्धको मुद्दामा खातुनको निवेदनले नयाँ परिस्थिति आएको छ । घटनामा ज्यान गुमाएका भनिएका त्रिलोक प्रताप सिंह र ओशी अख्तर मारिएको भन्दै परिवारले प्रहरीमा किटानी जोहरी दिएको थियो । तर ओसी अख्तरकी पत्नीले भने आफ्ना पति इँटा भट्टामा नमारिएको बरु विदेश गएर नफर्किएको भन्दै निवेदन दिएपछि घटना अर्कै तर्फ मोडिने संकेत देखिएको छ ।
१८ जनाभन्दा धेरैलाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा सांसद आलमविरुद्ध विहीबार नै बयान सकिएपछि अमना अदालत पुगेकी प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पति ओसी अख्तरलाई आलमले जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर मारेको बयान दिएको उनले अचानक जिल्ला अदालतमा बयान फेर्दै लिखित निवेदन दिएपछि यसबारेमा थप चर्चा सुरु भएको छ ।
यसैबीच, बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै जलाएको भनिएको समयमा रौतहटका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी रामकृष्ण लामालाई खोज्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन एसपी लामाको बयान लिनु पर्ने भए पनि नभेटिएपछि सहयोग गरिदिन भन्दै प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरिएको हो ।
मुद्दामा नयाँ अवस्था सिर्जना भएपछि पूर्वमन्त्री आफताव आलमलाई थुनामुक्त गरिए घटनासँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण नष्ट हुने प्रबल सम्भावना व्यक्त गर्दै थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्न थालिएको छ ।
अदालतमा पीडितको पक्षमा वकालत गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रो.डा. युवराज संग्रौलाको अनुभव-
मैले भनी सकेँ, सरकारी वकिल र पीडितका कानुन व्यावसायीको बहस सकियो। गत हप्ता पटकपटक मौन जुलुसहरु भए, र त्यसले परिस्थितिलाई शंकास्पद बनायो। अदालत वरिपरि र सडकमा २०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। कानुन व्यवसायीहरु बसेको होटेलमा समेत सुरक्षाकर्मीले रातभरी सुरक्षा गरेको देखियो । अनलाइन खबरहरुमा ज्यादै तथ्यहिन खबरहरु आएको पाइयो। केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु-
१. मोहमद अफताब आलम लगायत अन्य १० जनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको २०६९ सालमा मुद्दा अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेशबाट यो मुद्दाको फेरि उठान भएबाट अहिले पुर्पक्षमा आएको हो ।
२. रौतहट जिल्ला अदालतले निष्पक्ष ढंगले कारबाही गरेको मैले देखेँ । करिब दुईदिन आलमलाई बयान गर्ने मौका दिएको छ, र उहाँका कानुन व्यावसायी साथमा छ्न् ।
३. मिति २०७६ कात्तिक २१ गते अभियुक्तको बहस सकिएपछि, मृतकमध्येका ओसिकाका तर्फबाट उनकी श्रीमतीको निवेदन भनी एउटा कागज लिएर, एकजना लोग्ने मानिस इजलासमा आए । यी श्रीमती भन्ने महिला जाहेरवाला होइनन् । मृतककी आमा जाहेरवाला हुन्, जसको हत्या गरियो । यी निवेदन लिएर आउने महिलाको निवेदनमाथि मृतकका परिवारको समर्थन छैन । यस निवेदनले त आलमलाई नै जटिलता थप्ने हो । श्रीमान जीवित छन् भनेपछि त उनले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब मरेको श्रीमान कहाँबाट लयाउने होला उनले !
आफुले गरेको दाबी आफुले प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाण ऐनको व्यवस्था यहि हो । यसर्थ, मुद्दा अर्कोतिर ट्विस्ट भनी अफवाफ फैलाउनु पर्ने अवस्था वा कारण छैन । मुद्दा पुर्पक्षमा छ, र अदालतलाई प्रवाभित कसैले पार्न सक्ने अवस्था छैन ।
४. सूचना दिने र पाउने हक छ । तर मुद्दा अब अदालतले होइन मिडियाले छिन्न थाले जस्तो छ। अनावश्यक हाइप र विचित्रका शिर्षकहरुले मुद्दाको गम्भीरता नै तेजोबोध हुन थालेको देखिन्छ। अब अदालतले प्रमाणको परीक्षण गर्छ मिडियाले होइन ।
५. हो, विगत लामो समयदेखि आलमको दब्दबा देखिन्छ। तर उनको दबदबाले न्याय प्रभावित हुने अवस्था अब छैन। यस बम विस्फोटमा मर्ने कार्यकर्ता पनि नेपाली कांग्रेसकै हुन् । त्यस उसले आलम बोकेर नहिंड्ला किनभने कांग्रेस हिंसामा विश्वास गर्ने पार्टी होइन । आलमको वा सर्वसाधारणको पक्षमा लाग्ने हो, त्यो कांग्रेस पार्टीको कुरा हो। तर यस मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरु उल्झिनु हुँदैन। अदालतले गर्ने इन्साफ हुन दिनु राम्रो हुन्छ। यो कांग्रेस पार्टीले गरेको अपराध पनि होइन र कांग्रेस पार्टीलाई फसाउन कम्युनिष्ट लागेको पनि हामीले देखेनौं। यो मुद्दा अफताव आलम विरुद्धको हो र उनका विरुद्ध जाहेरी दिने हिजो उनकै कार्यकर्ता रहेछ्न् ।
६. त्यसैले यस मुद्दालाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट पुर्पक्ष हुनदिनु सवैको कर्तव्य हो। सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल छन्, पीडितका पक्षबाट पनि कानुन व्यवसायी छन् र प्रतिवादीका तर्फबाट पनि वकिल छ्न् । त्यसैले न्याय मर्दैन ।
७. तर केही प्रश्न छन्, जसले न्याय खोजेका छन् । जस्तै रोक्साना खातुनको छोराको लागि लड्दा हत्या भएको छ। उनको मुद्दामा फेरि अनुसन्धान भै न्याय हुनुपर्छ । घाइतेहरु छन् जसले कान गुमाएका छन्, गम्भीर चोट लागेका छ्न्। हिजो केही भ्रष्ट व्यक्तिका कारणले उनीहरुले न्याय गुमाएका छ्न् । उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
पत्रकार साथीहरूलाई यथार्थ खबर दिन अनुरोध गर्दछु । यसलाई समर्थन वा विरोधमा हाइप नबनाऊँ । न्यायको क्रमलाई काम गर्न दिऊँ ।
मोहम्मद अफताव आलमclose